देउवा, प्रचण्ड र नेपालप्रति ओलीको प्रश्नः एमसीसी झुक्याएर पारित गर्न खोज्या हो ? - दर्पण संसार
देउवा, प्रचण्ड र नेपालप्रति ओलीको प्रश्नः एमसीसी झुक्याएर पारित गर्न खोज्या हो ?
२०७८ भाद्र १९, शनिबार १२:०९ बजे
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालमाथि कटाक्ष गर्दै प्रश्न गरेका छन् ।
शनिबार नेकपा एमालेको काठमाडौं महानगरपालिकास्तरीय कार्यक्रममा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे के गर्ने भन्दै जवाफ मागेका हुन् ।
एमसीसी झुक्याएर पारित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै ओलीले भने, ‘एमसीसीबारे कोही बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्, शेरबहादुर देउवाले भन्नुपर्दैन एमसीसी के गर्ने ?, प्रचण्डजीले बोल्नुपर्दैन एमसीसी के गर्ने ? उहाँहरु चुपचाप छन् ।’ ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनसँग सीमा विवाद नरहेको भन्दै कसलाई खुशी पार्न चीनसँग सीमा विवाद समाधान गर्न समिति बनाएको भन्ने प्रश्न गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीनले हुम्लामा नेपालको भूमि मिचेको भन्दै त्यसको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । उनले कसलाई खुसी पार्नका लागि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको हो ? भनेर प्रश्न पनि गरे । उनले सरकारलाई सीमा विवाद कहाँ छ भनेर देखाउन चुनौती समेत दिए ।
पार्टीका पूर्वनेता माधव नेपालप्रति क्रूद्ध देखिएका ओलीले भने, ‘दुनियाँ देश गएँ, तर माधव नेपालजस्तो लाजशरम पचेको मान्छे कतै देखिनँ ।’ वामपन्थी सरकार ढालेर, विकासको काम गरिरहेको सरकार ढालेर क्रान्तिका कुरा गरेको भन्दै उनले नेपालको आलोचना गरेका हुन्
उनले आफूले जस्तो अरुले विकास गर्न नसक्ने दावी गर्दै अब मेलम्चीको पानी ल्याउन पनि एमाले कै सरकार चाहिने जिकीर पनि गरे । अहिलेको सरकारले ल्याउन नसक्ने ठोकुवा गरे ।